5 Siyaabood oo Suuq-u-dhowaansho Ku-saleysan Saameyn Ku Iibsiga Iibsiga Macaamiisha | Martech Zone
Tiknoolajiyadda iBeacon waa isbeddelkii ugu dambeeyay ee ku soo kordha suuqgeynta moobiilka iyo ku-dhowaanshaha. Teknolojiyaddu waxay xiriirisaa ganacsiyada macaamiisha ku dhow iyada oo loo marayo gudbiyeyaasha tamarta yar ee Bluetooth (beacons), iyagoo u diraya tigidhada, tusmooyinka sheyga, dallacaadaha, fiidiyowyada ama macluumaadka tooska ah aaladda moobilkooda.
iBeacon waa tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee ka timaadda shirkadda Apple, sannadkanna sannadlaha ah Shirka horumarinta aduunka, tiknoolajiyada iBeacon waxay ahayd mowduuc muhiim ah oo laga wada hadlay.
Iyadoo Apple ay barayaan kumanaan horumariyayaal wax badan oo ku saabsan tikniyoolajiyadda, iyo shirkadaha sida BeaconStream u fidinta barnaamij ganacsiyada si ay u adeegsadaan tikniyoolajiyadda iyo awoodaha ay ku soo daraan barnaamijyadooda jira, waxaan filan karnaa oo keliya inaan aragno iBeacon oo si xowli leh u koraysa.
Ganacsatada, iBeacons iyo suuq ku dhowaansho Bixi hab cusub oo toos ah si loola xiriiro macaamiisha, loo kordhiyo wacyiga sumadda iyo saameynta dhaqanka iibsashada macaamiisha.
Ku kaxeeya dadka an iibso isla markiiba. Way dhammaadeen maalmihii suuqgeynta tooska ah ee suuqgeynta iyo lambarrada QR. Tikniyoolajiyadda 'iBeacon' waxay siisaa ganacsiyada hab ay si toos ah ugula xiriiraan macaamiisha mustaqbalka marka ay u badan tahay inay wax iibsadaan –markay u dhow yihiin ama dukaanka. Ganacsiyadu waxay u diri karaan dalabyo si ay u soo jiitaan iibsashada ama ay ugu dhiirrigeliyaan iibsashada dheeriga ah farriimaha iyo rasiidhada.
Waxay siisaa shirkadaha a khadka tooska ah ee macaamiisha. Si ka duwan noocyada kale ee suuq-geynta, suuq-geynta moobiilka ku-saleysan wuxuu siiyaa noocyada qaab saaxiibtinimo ah oo ay farriintooda ugu gudbiyaan gacanta macaamiishooda, macno ahaan. In kasta oo calaamadda dallacaadda dukaanka dhexdiisa ah la dhaafi karo oo la iska indho tiri karo, in si toos ah farriin loogu diro taleefanka macaamilka ayaa waxay abuureysaa hawlgelin ka wanaagsan. Sidoo kale waa hab gaar ah oo lagu muujiyo shakhsiyadda astaanta loona dhiso xiriir calaamadeysan oo xooggan macaamiisha.
Meelo badan oo taabasho ah macmiilkaaga. Hal meel wuxuu yeelan karaa dhowr, oo kala hagayaal kala duwan, mid walbana wuxuu bixiyaa farriin ka duwan. Tani waxay bixisaa fursado badan oo lagula xiriiro macaamil isla markaana loogu kaxeeyo inay tallaabo qaadaan. In kasta oo dallacaad si toos ah loogu diro guriga macaamilka ay noqon karto mid aan la adeegsan ama u kaxayn iyaga si ay u iibsadaan shay keli ah, shumacyadu waxay u oggolaanayaan ganacsatadu inay u diraan macaamiisha dalabyo dhowr ah oo khuseeya oo soo jiidanaysa iibsashada. Beacons waxay u suuq geynayaan goobta macaamiisha, iyagoo u diraya dallacsiinno badan waxyaabaha ku habboon baahidooda, dhammaantood waqtiga dhabta ah.
Beacons waxay siisaa ganacsiyada falanqaynta macaamiisha gaarka ah. Markaad adeegsanayso tikniyoolajiyada iyada oo loo marayo barnaamij sida BeaconStream, ganacsiyada waxay fursad u leeyihiin inay nolol ku noolaadaan Analytics iyo fikradaha ku saabsan dabeecadaha macaamiisha, taraafikada cagaha, isbeddellada iyo dabeecadaha wax iibsiga ee ka caawin kara iyaga inay si fiican u xoojiyaan suuqgooda suuq geynta iyo iibka. The Analytics ayaa ka caawin kara shirkadaha inay go'aamiyaan dallacaadaha iyo ololayaasha ay shaqeeyeen oo u oggolaanaya inay si dhakhso leh ula qabsadaan aragtiyahan.
iBeacon iyo u-dhowaanshaha suuq-geynta maahan wax fadlan. Suuqleyda ayaa horeyba u ogaa awooda suuqgeynta mobilada, iyo tikniyoolajiyadda iBeacon waa soo dhaweyn lagu soo kordhiyay istiraatiijiyad suuqgeyn dhameystiran. Noocyada ugu sareeya sida Macys, Starbucks iyo American Airlines ayaa durbadiiba si weyn maalgashi ugu sameeyay, waxayna arkayaan awooda iyo faa iidooyinka suuqgeynta kudhisan. Iyada oo ciyaartoy waaweyn ay riixayaan tikniyoolajiyadda, waxaan dhowaan filan karnaa inaan aragno astaamo dheeri ah oo lagu soo kordhiyay, sida isla goobta lacag-bixinnada moobiilka, wax-u-iibsiga xitaa u fududaanta macaamiisha iyo wadista iibin badan oo ganacsiyada ah.
Waa tan sida ay u shaqeyso BeaconStream
Tags: tufaax ibeaconxayawaanbeeconstreamsuuq geynta bluetoothjeexjeexasuuq ku dhowaansho
Jul 14, 2014 markay ahayd 11:17 AM
Post weyn Chris !! Runtii macluumaad faa iido leh .. Waad ku mahadsantahay wadaagida! ..
Jul 16, 2014 markay ahayd 5:10 AM
Waan ku faraxsanahay inaad tilmaantay tan! Ma jiro qof ka hadlaya arrintan. Uma maleynayo inuu qofna runtii aqriyay tilmaamaha cusub. Aragtideyda waxaan ka wada hadlay qodobo wanaagsan oo ku saabsan suuq u dhawaanshaha ku saleysan taas oo ah boosto la yaab leh oo loogu talagalay ganacsatada internetka. Waad ku mahadsan tahay qoraalkan weyn.
Jan 15, 2015 saacadu markay ahayd 9:49 PM
Waad ku mahadsan tahay qoraalka weyn ee Chris. Dhawaan waxaa jiray guux badan oo ku saabsan sida suuq-geynta dhawaanshaha ay u noqon karto mid ka mid ah aaladaha ugu wax ku oolka badan ee ka caawin kara ganacsiyada inay abuuraan ROI sare fudeyd leh. Xaqiiqdii, khubarada warshaduhu waxay qabaan fikradda ah in horay loo socdo ay ugu wanaagsan tahay ganacsatadu inay iswaafajiyaan qorshahooda istiraatiijiyadeed ee suuqgeynta baahida iyo dookha macaamiishooda. Si kastaba ha noqotee, iyada oo suuqleyda badani aysan ka warqabin sida loo dhexgeliyo shumacyada istiraatiijiyadooda mobilada qaar ka mid ah tijaabooyinkan nalka ayaa niyad jab ahaa. Waxaan ka wada hadalnay wax yar oo sir ah guusha ololaha suuqgeynta kuwaas oo ka caawin doona suuqleyda inay ku guuleystaan ​​ololahooda soo socda halkan: http://blog.mobstac.com/2015/01/4-tips-to-kickstart-your-proximity-marketing-campaign/